iphone Archives » ICT.com.mm
ICT.com.mm > iphone
Android Phone နဲ့ iPhoneနှစ်လုံးထဲက တစ်လုံးကို ရွေးချယ်ရတော့မယ်ဆိုရင် စဉ်းစားရမယ့် အချက်တွေ ရှိပါတယ်။ iPhone အစား Android Phoneကို ရွေးချယ်လိုက်တယ်ဆိုရင် ကောင်းတဲ့အချက်တွေ ရှိပါတယ်။ Android Phone တွေဟာ Gmail,…
iPhone6Plusဟာ ကွေးကောက်တယ်ဆိုတဲ့ ဗီဒီယို လက်တွေ့ပြချက်တွေ ပေါ်ထွက်ခဲ့ပေမယ့်လည်း ဒါဟာ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် စမတ်ဖုန်းတစ်ခု ထုတ်လုပ်ပြီးနောက်မှာ Appleကြုံတွေ့ရတဲ့ ပထမဆုံးအကြိမ် ပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့ခြင်း မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်တော့ S အမျိုးအစားမဟုတ်တဲ့ နောက်ဆုံး iPhoneတွေ…
Appleက စက်တင်ဘာလ ကိုးရက်နေ့တွင် မျက်နှာပြင်ကြီး iPhoneများကို မိတ်ဆက်ဖို့ ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ အတွင်းသိတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။ ကယ်လိုဖိုးနီးယားပြည်နယ် Cupertino အခြေစိုက် Appleက ၄.၇ လက်မ မျက်နှာပြင်နဲ့ ၅.၅ လက်မ မျက်နှာပြင် iPhone…
iPhoneနဲ့ iPadကို အသုံးပြုတာ ကြာလာတာနဲ့ အမျှ နေရာလွတ်များ နည်းပါးလာမှာပါ။ Appsနဲ့ ဖိုင်တွေက သင့်ရဲ့ iDeviceမှာ တစ်ဖြည်းဖြည်းနေရာယူလာကြပါတယ်။ ဘယ် Appတွေက နေရာဘယ်လောက်ယူလဲ၊ ဘယ်ဖိုင်တွေက နေရာဘယ်လောက်ယူထားလဲဆိုတာ လေ့လာပြီး ဖယ်ရှားသင့်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့…
iPhoneဟာ အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့စမတ်ဖုန်းဆိုတာ ငြင်းမရပါဘူး။ ဒါပေမယ့် iPhoneရဲ့ Settingsတွေကို သင့်ရဲ့ အသုံးပြုပုံပေါ်မူတည်ပြီး ပြောင်းလဲအသုံးပြုမှသာ အစွမ်းထက်မှာပါ။ နောက်ပြီး iPhoneမှာ စွမ်းဆောင်ချက်များစွာ ပါရှိတဲ့ အတွက် အဲဒါတွေအားလုံးကို သိနိုင်ဖို့ဆိုတာ မလွယ်ကူလှပါဘူး။ အခုဆောင်းပါးမှာ အသုံး၀င်တဲ့…
iPhoneကို အားသွင်းပေးနိုင်တဲ့ Chargerများစွာ ရှိပေမယ့် ကြိုးနဲ့ ချိတ်ဆက်ရတာတွေ၊ သယ်ယူရခက်ခဲတာတွေ စတဲ့ ပြဿနာများရှိပါတယ်။ အခုအခါမှာတော့ Rubixက AUGMENTလို့ အမည်ပေးထားတဲ့ Chargerနဲ့ Caseတွဲလျက်အသုံးပြုရတဲ့ Gadgetကို တီထွင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Caseကို iPhoneမှာ တပ်ဆင်ပြီးရင်…
သင် iPhoneကနေ Android ပြောင်းကိုင်ဖို့ စဉ်းစားနေသလား? အခုဆောင်းပါးမှာ iPhoneက Contacts, Photos, Videoနဲ့ အခြားဒေတာတွေကို Galaxy S5 ဆီသို့ ကူးပြောင်းနိုင်တဲ့ နည်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ Samsungက Appleရဲ့ iCloud…
စမတ်ဖုန်းတွေဟာ ဖုန်းနံပါတ်တွေကို မှတ်သားပေးနိုင်တဲ့ အတွက် ကျွန်တော်တို့လူသားတွေဟာ ဖုန်းနံပါတ်တွေ ကို မှတ်သားစရာမလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဖုန်းနံပါတ် တစ်ခု ရဲ့ Extension ကို ဘယ်လို မှတ်သားပြီး အလိုအလျှောက် ခေါ်ဆိုနိုင်သလဲ? မှတ်စု App…
Apple ရဲ့ Calendar App ထက်ကောင်းတဲ့ Calendar Apps တွေ iTunes App Store မှာ များစွာ ရှိပါတယ်။ ရွေးချယ်စရာများစွာ ထဲမှာ Sunrise က စွမ်းဆောင်ချက်များစွာပါရှိပြီး Calendar…
ဒီနေ့ခေတ်မှာ အီးမေး ကို အလုပ်ကိစ္စများမှာ အသုံးပြုလာကြပြီး အီးမေးပေးပို့ ရယူမှု တွေကို နေ့စဉ် ပြုလုပ်နေကြရပါတယ်။ အရေးကြီး အီးမေးတွေကို ပေးပို့တဲ့အခါမှာ သင်ပို့လိုက်တဲ့ အီးမေး ကို တစ်ဖက်လူ က ဖတ်ပြီးပြီလားဆိုတာ သိဖို့…
ဖောက်ထွင်းမြင်ရတဲ့ iPhone လာမည်
စမတ်ဖုန်းအသုံးပြုသူများ ရဲ့ (၁၂) ရာခိုင်နှုန်းဟာ လမ်းလျှောက်ရင်း စာရိုက်ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ လမ်းလျှောက်ရင်း စာရိုက်တဲ့အခါမှာ အန္တရာယ်တွေ ဖြစ်ပွားမှုများပြားလာတဲ့ သတင်းတွေ အင်တာနက် မှာ ကြားသိရပါတယ်။ Apple က iPhone အသုံးပြုပြီး လမ်းလျှောက်ရင်း…
iPhone အတွက် အကောင်းဆုံး Messenger
iPhone မှာ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Messenger များစွာ ရှိပေမယ့် အကောင်းဆုံး ကို ရွေးပါဆိုရင် IM+ ကို ရွေးချယ်ချင်ပါတယ်။ အသုံးပြုရလွယ်ကူတဲ့ User Interface ရှိပြီး Chat ၀န်ဆောင်မှုများစွာ ကို Support…